कलंकी–नागढुंगा सडक, सर्वोच्चमा ४७ जनाको रिट - Chandragiri News
Home मुख्य कलंकी–नागढुंगा सडक, सर्वोच्चमा ४७ जनाको रिट
कलंकी–नागढुंगा सडक, सर्वोच्चमा ४७ जनाको रिट
२०७४, २१ श्रावण शनिबार १९:३९
अदालतमा मुद्दा रोकिँदा उपत्यका का सार्वजनिक सडक दुरवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्चमा बिहीबार कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डसमेत गरी सार्वजनिक बाटोका ६ वटा बाटो सम्बन्धी मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। पूर्ण इजलासले टुंगाउने भनिएको मुद्दा स्थगितको सुचिमा परेको थियो ।
कलंकी–नागढुंगा सडक बनाउँदा व्यक्तिगत जग्गा मिचिएको र मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीय सानु श्रेष्ठसमेत ४७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्। रिट निवेदकहरूले जग्गाको बाटोको क्षतिपूर्ति र घरबास उठिबास हुने भएकाले विधिवत् मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
सर्वोच्चले ६ महिनाअघि सार्वजनिक सडकको मुद्दामा ‘सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कलंकी–नागढुंगा सडकसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भएपछि मात्र अन्य मुद्दा पेस गर्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो, नागरिकन्युजमा खबर छ । ६ महिनाअघि भएको सो आदेशपछि बाटोका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन। कलंकी नागढुंगा सडकखण्डमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। यस्तै साँखु–दक्षिणढोका, थली–साँखु, रामकोट–सीतापाइला–भीमढुंगा, सातदोबाटो–ढोलाहिटी–चापागाउँ सडक खण्डमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। बल्खु–दक्षिणकाली, बौद्ध–जोरपाटी, कालीमाटी–कलंकी लगायत सडकका मुद्दा सर्वोच्चमा छन्।
कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डमा स्थानीय बासिन्दाले केही घर मात्र भत्काउन दिएका छैनन्। कतिपयले क्षतिपूर्ति समेत लिइसकेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी बताउँछन्। ‘मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दा भएकाले भन्न सजिलो भएको छ। मुद्दा नभएका बाटो किन बनेनन्?’ उनी प्रश्न गर्छन्। उनले ठेकेदार र कर्मचारी दोषी देख्छन्। ‘पाँच अर्बको काममा दैनिक २०।२२ जनाले सडकमा काम गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘मुद्दा देखाउने बहाना मात्र हो। ठेकेदारको खेल हो। बाटो मर्मतको काम एकदमै ढिलो भएको छ ।’
कर्मचारीले मुद्दाको निहुँमा जनप्रतिनिधिलाई नटेरेको प्रमुख गिरीको तर्क छ । उनले भने, टेलिफोन र बिजुलीको तार किन हट्दैन? खाल्टाखुल्टी किन पुरिँदैन? मुद्दाका नाममा तमासा देखाइएको छ।’ प्रमुख गिरीका अनुसार कलंकीदेखि ढुंगेअड्डासम्म बाटोमा कुनै विवाद छैन। नैकापमा चारपाँच घरबाहेक सतुंगलसम्म पनि समस्या छैन। बलम्बुचोक केही घरमा विवाद छ। थानकोट चौकीदेखि त्रिभुवन पार्कसम्म विवाद नभएको उनको दाबी छ ।
Previous articleएनआइसी एशिया बैँकको थानकोट शाखामा पनि डलर सटही सुविधा
Next articleएसईई परीक्षामा उटकृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने छात्र र छात्राहरुलाइ सम्मान